I-Magnolia Cottage - I-Airbnb
Levels Valley, Canterbury, i-New Zealand
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Ann izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Magnolia Cottage iyindlwana yangasese ezimele ebekwe endaweni enokuthula yekhaya lethu. Ngombhede ozizwa usekhaya futhi uthokomale, uzovuka uzizwa uqabulekile ngenxa yomsindo wezinyoni kanye nephunga lesinkwa esisanda kubhakwa.
I-Magnolia Cottage isinakho konke ngokwakho. Inekamelo lokulala elihlukile nendawo yokuhlala evulekile. Kunenkundla yangaphandle yangasese. Indlwana inombono wasemaphandleni kodwa ukuba seduze nekhaya lethu siyatholakala ukuphendula imibuzo uma kudingeka.
I-Magnolia Cottage ingamakhilomitha angu-3 ukusuka edolobheni elihle lase-Pleasant Point elinesitimela nomnyuziyamu wayo ongokomlando. Sihamba ngemizuzu engu-5 ngemoto ukusuka e-Level Raceway nemizuzu engu-20 ukusuka e-Central Timaru nase-Caroline Bay. Singamahora angu- ngemoto ukusuka e-Tekapo enkabeni yezwe lase-Mackenzie
Siyatholakala ukuphendula noma yimiphi imibuzo izivakashi zethu ezingase zibe nayo. Siyakujabulela ukuhlangana nezivakashi zethu kodwa uma ufuna ikhefu elithulile sizokuvumela ukuthi ujabulele ukuthula kwe-Magnolia Cottage